မျှော်လင့်ခြင်း Medical Center မှအကြောင်း | မြျှောလငျ့ခ Medical Center မှ
2018နှစ်၏နှစ်အရ ၂.၃၆၇.၆၀၇ နိုင်ငံခြားသား ၂.၃၆၇.၇၀၇ ကိုရီးယားတွင်နေထိုင်သည်။ ၎င်းတို့အနက် ၃၅၀,၀၀၀ သည်ကိုရီးယားတွင်နေထိုင်သောမှတ်ပုံတင်မရှိသောရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများဖြစ်သည်။. လူအ ဘုံကိုရီးယားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်3ကြိမ်မှ 2.5 ကြိမ်လှည့်ပတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများ, နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားမြင့်မားပြင်းထန်မှုကို manual လုပ်အားနှင့်အတူကြွက်သားမမှန်ရှိ, ထ / duodenal အစာအိမ်နာ, မြင့်မားသောသွေးဖိအား, အာရုံများကိုထိခိုက်လွယ်ခြင်း, ဆီးချိုရောဂါနှင့်ဆိုင်သော, နှလုံးရောဂါဘုံဖြစ်ပါသည်.
ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်နီးပါးနှစ်ကြိမ်ဘုံအဖြစ်ကိုရီးယားနှင့်စတင်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်, လူဝင်မှု၏ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများ ရောဂါပျံ့နှံ့မှုပြည်တွင်းထက် 5-6 ဆပိုများသည် အဓိကအားဖြင့်သွေးအားနည်းရောဂါ, မတည့်ရောဂါများ, ထ / duodenal အစာအိမ်နာ, သားအိမ် fibroids, မြင့်မားသောသွေးဖိအားကိုလည်းဘုံဖြစ်ပါသည်. အိမ်ထောင်သည်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ၏အိမ်ထောင်ဘက်လည်းမကြာခဏပင်သားသမီးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုကျန်းမာရေးပြဿနာများ၏ညည်းညူ
'Hope Medical Center' သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာချို့တဲ့သူများအတွက် ဆေးခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကိုရီးယားမှာကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထက်သာလွန်သည်, ဒါပေမယ့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏မျက်စိကန်းသောအစက်အပြောက်နေဆဲရှိပါတယ်အဆိုပါအကဲဖြတ်. ဘာသာစကားသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုရှိသူတို့များထဲတွင်နိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများကောင်းသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံကမိသားစု, စသည်တို့ကိုဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ, တစ်ဦးဆေးကုသမှုနွဲ့ရှိပါတယ်. ဤ ကိုရီးယားကြက်ခြေနီအသင်းနှင့် Samsung တို့သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာချို့တဲ့သူများအတွက် သင့်လျော်သောကုသမှုပေးနိုင်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။, ထို့ကြောင့် 'Hope Medical Center' ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။.
အမျိုးသား ကြက်ခြေနီ ဆေးရုံကြီးအတွင်း တည်ရှိသော Hope Medical Center သည် မျက်စိကွယ်သော နေရာရှိ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ချို့တဲ့သူများအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။. ကိုရီးယားကြက်ခြေနီသည် ကြက်ခြေနီဆေးရုံအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထောက်အကူပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးသည်။, ဆမ်ဆောင်း, လူမှုဖူလုံရေး အသိုင်းအဝိုင်း ရင်ဘတ်သည် တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘဲ ဘေးဖယ်ထားသော နေရာအများစုတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လေ့ကျင့်ရန် ငွေကြေး ပံ့ပိုးပေးပါသည်။.